लकडाउन सकस : आमा बिरामी, छोरा ह्विलचेयरमा, यो परिवारलाई कसले हेर्ला ? – जुगल टाईम्स
Posted on २० बैशाख २०७७, शनिबार १०:२६ Author जुगल टाईम्स	Comment(0)
जोरपाटीमा बस्दै आएका फरक क्षमताका भीमबहादुर भुजेल डोरी बनाउने काम गर्थे। सोही कामबाट हुने कमाइले परिवार जसोतसो पाल्दै आएका थिए।
तर, कोरोना नियन्त्रण गर्न लगाइएको लकडाउनले ह्विलचियरमा बसेरै गुजारा टार्नका लागि काम गर्दै आएको उनको पेशा पनि खोसिदियो। सिन्धुपाल्चोक घर भएका भुजेललाई यतिखेर कसरी भाई र आमाको पेट पाल्ने भन्ने चिन्ताले छटपटी भैरहेको छ। अर्कातिर अहिले उनकी आमा बिरामी परेकी छिन्‌।
औषधी किन्नका लागि आवश्यक रकम जुटाउन हात फैलाउनुपर्ने अवस्था छ। उनी भन्छन,‘आमा अहिले बिरामी हुनुहुन्छ। काम पनि अहिले गर्न पाएको छैन। घरमा चार दिनजति पुग्ने चामल छ। सकेपछि के खाने हो? अब आमाको औषधी कसरी किन्ने? चारैतिरबाट समस्याले मलाई घेरिरहेको छ।’
उनका भाई कृष्ण भुजेल पनि शारिरिक अशक्त हुन्‌। ‘हामी दुवै दाजु भाई शारिरिक अशक्त हौं, ’उनले मलिन आवाज बनाउँदै फोनमार्फत सुनाए, ‘बाहिर निस्कन सक्ने स्थिति छैन, सहयोगीहरुले दिएको राहत पनि सकिन लाग्यो, चिन्ता त आमाकै बढी छ।’ भुजेलको खुट्टा चल्दैन।
त्यसैले ह्विलचियरमै बसेर सकि-नसकी डोरी बुन्ने काम गर्छन्‌। त्यही कामबाट उनले मासिक १५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने गर्थे। आमाको औषधी उपचार र घर खर्चको आधार नै यही कमाई थियो। तर, अहिले काम बन्द भयो। काम बन्द भएसँगै पैसाको अभावले यतिखेर भुजेल परिवार निकै सकसमा परेको छ।
आमाको उपचारमै चिन्ता भुजेललाई अहिले पेट भर्ने र आमाको उपचार गर्नमै चिन्ता छ। उनका अनुसार एक हप्ताअघि एक जना सहयोगी व्यक्तिले आमाको औषधी उपचारको लागि सात हजार रुपैयाँ दिएका थिए।
तीन दिन अघि पनि एक सहयोगीले तीन हजार रुपैयाँ दिएका थिए। तर अहिलेसम्म सो रकम पनि सकिइसकेको छ। दाजुभाई दुवैले आमालाई आफू भन्दा बढी माया गर्छन।
त्यसो त सहयोग जुटाएर भएपनि आमालाई उपचार गराएर बचाउन चाहन्छन। ‘आमाको फोक्सो सुन्निएको छऽ कहिले डबल औषधी दिनुपर्छ,’ भिमका भाई कृष्ण भुजेल भन्छन्‌, ‘अहिले आमा घरमै हुनुहुन्छ, डाक्टरले अस्पताल भर्ना गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, अब कहाँबाट रकम जुटाएर भर्ना गर्नु र!’
सहयोगको लागि वडामा निवेदन हाल्न नपाएको बताउँदै भुजेल परिवारले आर्थिक सहयोगका लागि अपिल गरेका छन्‌।
Posted on १५ बैशाख २०७७, सोमबार १०:२५ Author जुगल टाईम्स
गुलरिया नगरपालिकाका मुकुन्द सुवेदीले १९ बिघा क्षेत्रफलमा ६० हजार केराखेती गर्नुभएको छ । गत वर्ष केराबाट राम्रो आम्दानी गर्नुभएका सुवेदीको यस वर्ष लकडाउनका कारण बिक्री गर्न समस्या भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रु २६ लाख बराबरको केरा बिक्री गर्नुभएका सुवेदीले यस वर्ष रु १० लाखको मात्रै बिक्री गरिएको बतााउनुभयो । सुवेदीले जिल्ला कृषि विकास […]